“DAAWO”Gudoomiye Muungaab oo xariga ka jaray waaxda Gaarisa ee degmada C/casiis | SNTV
“DAAWO”Gudoomiye Muungaab oo xariga ka jaray waaxda Gaarisa ee degmada C/casiis
Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Mudane Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” oo ay wehliyaan mas’uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta xariga ka jaray xarunta waaxda Gaarisa ee degmada C/casiis ee gobolka Banaadir oo dib u dayactir lagu sameeyay.
Gudoomiyaha degmada C/casiis Cismaan Muxiyadiin Cali Cariif oo munaasabadda waaxdan xariga looga jarayay hadal ka jeediyay ayaa u mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir iyo hay’adda DRC oo dhismaha xarunta hirgelisay.
Gudoomiyaha Maamulka gobolka Banaadir Mudane Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” ayaa sheegay in howlaha lagu dayactiraayo xarumaha muhiimka ah ay sii socon doonaan isla markaana maamulka ay ka go’an tahay in ay dardargeliyaan howlaha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed oo ku nool degmooyinka gobolka Banaadir.
Dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir Ismaaciil Macalim Cabdi Guure ayaa tababar socon doona muddo labo cisho ah u furey 35 qof oo ka tirsan waaxda canshuuraha ee dowladda Hoose ee Xamar.
C/qaadir Muxiyadiin Dalxa oo ah wakiilka dowladda Hoose ee Xamar u qaabilsan horumarinta dhaqaalaha oo furitaanka tababarka ka hadlay ayaa sheegay in tababarkan ay dowladda Hoose ka gacansiinayso ururka shaqaalaha Aduunka ee ILO.
Gudoomiyaha ku xigeenka dhanka maaliyadda ee maamulka gobolka Banaadir Ismaaciil Macalim Cabdi “Guure” ayaa ka hadlay ahmiyadda ay wadanka u leedahaya qaadista canshuurta, isagoo tilmaamay in canshuurtu ay tahay laf-dhabarta dhaqaalaha wadanka.